Noorway: Guurka u dhexeeya dadka iyo xayawaanka ayaa sharciyeysan "Noorway, guurka u dhexeeya bini'aadamka iyo xayawaanka rabbaayadaysan waa macquul; marka laga reebo xayawaanka duurjoogta ah, cayayaanka, shimbiraha iyo xayawaanka badda "... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Nofembar 5, 2019 00: 00 3 Comments
Dalkan, Barbara, haweeney da 'yar oo ah 23 sano, waxay ahayd qofkii ugu horreeyay ee shaabadayn waxa loogu yeero midowga zoocontractuelle. Ninkay jecel yahay ma aha mid aan ahayn Rudolf, oo ah doberman ka tagtay oo ay ku soo ururisay guriga 2015. In kasta oo xayawaanku waxba ka aqoon guurka, Barbara kalsooni ayey ku qabtaa, laakiin markay noqoto ka hadalka ku saabsan galmada ee lammaanaha, Mrs. Rudolf kuma wareejinayso baadiyaha.
Waxa Rudolf iyo waxaan ku kacno sariirta ama dambiisha dan kama laha, waad ogtahay, aniga si aad ah ugama jeedin arintaas, ninkayga mustaqbalkuna aad ayuu ugu qanacsan yahay arintaas, waxaan leenahay xiriir dhow oo lammaane, sida dhamaan labada qof ee isqaba, iyo mabda'a isku soo dhawaashaha waa in ay tahay wax aan caadi aheyn oo aanan ahayn inaan idinkala hadlo.
Rudolf Trüdlosmek, eyga 1er inuu qaado magaca magaca bini'aadamka: Rudolf oo aan lahayn magaca awadeed, wuxuu ahaa Barbarä isaga ayaa siiyay, maadaama sharciga Norwey uu saadaaliyay tan iyo aasaaskii boqortooyada. Adduunku halkee ayuu marayaa? "
Ilaha: Dagens Næringsliv, sirnews.fr,
England: Elisabeth Hoad, oo ay ka xuntahay ragga ayaa guursaday eeydeeda - iyada oo in ka badan balanta 220 ay la gasho ragga iyada oo loo marayo goobaha shukaansi ee 6 sanadihii 8 welina aan helin midka ku habboon iyada. Xafladda arooska ayaa laga sii daayay telefishanka ingiriiska.
Logan waa Ey ay Elizabeth ka soo qaadatay hoy. Waxay sheegtay in ay u egtahay in loo sameeyay in ay kulmaan oo ay wada noolaadaan. Waxay sharraxday inay iyadu badbaadisay isaguna uu badbaadiyey, in isaga hortiisa, ay tirtireen.
Maxey Blacksku u Leeyihiin addoonsiga Muddo Dheer? Maya, aad uga fog si kasta ha noqotee.
In la guursado xayawaan waa bini-aadamnimo, waddan oo dhan ayaa lumiyay sababtii loo aqbali lahaa waxyaalahaas oo kale?
Reply in Kasereka
Waa wax aad u xun waxa aan arko iyo waxa aan maqlo. Sidee qof caqli leh caqli iyo caqli ku guursaday xayawaan. Xitaa kuma fiicna fahanka, oo waxay ka mid tahay dadka reer Galbeedka inaan ka helno caqabad-darridaan aadka u ba'an.
Baybalka TOB ayaa horay u saadaaliyay waxan oo dhan INH walaalkay. Horey ayey u ahayd dhammaadka dunida. Waxaanna ka codsanayaa madaxda Afrika inaysan meel marin sharcigaan halkan, maxaa yeelay Afrika waa dad caqli badan oo ilbaxnimo leh.
Dood - Kamarad: dhakhaatiir dhaqameedyo ka soo horjeedey Covid-19 sham; Dhakhaatiir dhaqameedyada reer Cameroon ayaa isu abaabulay inay si kulul u dhalleeceeyaan shirqoolka lagu laayay dadka madow / Afrikaanka ee faafay cudurka faafa ee virus Corona… (VIDEO)
Fayras Corona: caqli badan, caqli badan iyo badh; Waxay abuureen fayraska Corona si loogu bar-tilmaameedsado dadka madow / Afrikaanka; Covid-19 dib-u-daabacay; rag xun, in ay yihiin nimankan cadaanka ah, wax tixgelin ah kuma lahan ninka Madow / Afrikaanka ah, laakiin fiiri inta uu le'eg yahay cudurka loo yaqaan 'corona virus' ee ku sugan daafaha '… (VIDEO)